Taageerayaasha Napoli oo xalay sameeyay xeelad ay ku daalinayaan Real Madrid – Gool FM
Taageerayaasha Napoli oo xalay sameeyay xeelad ay ku daalinayaan Real Madrid
(Napoli) 07 Maarso 2017 – Qiyaastii 100 taageere oo reer Napoli ah ayaa sida lasoo werinayo waxay hoonka baabuurta iyo wax kasta oo ay hurdada uga qasi karaan kooxda Real Madrid oo xalay jiiftey hoteel halkaa ku yaalla.
Kooxda Partenopei ayaa doonaysa inay dhinaca kale u geddiso 3-1 looga soo badiyay lugtii hore ee 16-ka Champions League Last, waxaana caawa la filayaa Stadio San Paolo oo mar kale ku buuqi doona kooxdan.
Yeeelkeede, warsidaha reer Spain ee Sport ayaa sheegaya in buuqaasi aanu garoonka uun ku ekaanin, iyadoo ay ilaa 100 qof iskugu soo urureen hoteelka Los Merengues iyagoo hoon yeerinaya oo jaqafyo isku garaacaya.
Ujeedku wuxuu ahaa in laacibiiinta Real Madrid loo diido inay hurdaan si iyagoo daallan ay usoo xaadiraan kulanka caawa, waxaa intaa dheer inay saaka ka baaqdeen tababarka kaddib markii uu Zinedine Zidane dhibaato u arkay cariiriga jidka loo marayo xerada tababarka.
Elman iyo Horseed oo is mari waayay iyo Gaadiidka oo xasuuqday Bariga Dhexe+SAWIRRO
SAWIRRO: ''Caawa dab baan gelin doonnaa Real Madrid'' - Taageerayaasha Napoli oo dhaarsan